မျိုးမြင့်ချို: November 2015
(တချို့ကိစ္စနေရာမယ် ကိုယ့်ရပ်ခံချက်နဲ့မဟပ်တောင် အစပ်တည့်မတည့် မြည်းတော့ကြည့်စေ့ချင်) ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက သတင်းထောက် Lally Weymouth နဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ တာကို မြန်မာဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (Kamayut Media) မှတဆင့်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
- တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အနိုင်ရခဲ့တာကို အံ့သြလား။
မအံ့သြပါဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကို ကျမတို့ရရှိထားတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမမှန်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီး ရှိခဲ့တဲ့အပေါ် တော့ စိတ်ပူခဲ့ရတာပေါ့။ ဒါတွေကတော့ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွေ အမှားအယွင်းတွေ အများကြီးကနေ စတာပါ။
- မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွေမှာ ပြဿနာရှိခဲ့တယ်ပေါ့။
အစောပိုင်း ကျမတို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမစခင်ကတည်းကိုက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌက သူ့အနေနဲ့ မဲစာရင်း ၃ဝ%ကိုပဲ တာဝန်ယူနိုင်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါက နည်းနည်းတော့ စိတ်ပူရတာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ကျမက ပြည်သူတွေကို ပြောခဲ့တယ်။ ဒါဆိုရင် ကျန်တဲ့ ၇ဝ%ကို မှန်အောင်လို့ ကျမတို့ပဲ တာဝန်ယူကြတာပေါ့လို့။ မဟုတ်ဘူးလား။
- တစ်ချို့ဒေသတွေမှာ ပြည်သူတွေက သူတို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို မဲမပေးကြဘူး။ ရှင့်ကိုပဲ မဲပေးခဲ့ကြတယ်။
ကျမတို့ အရင်တုန်းကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အနိုင်ရခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို မမေ့လိုက်ပါနဲ့။
- ၁၉၉ဝတုန်းကလား။ ဒါဆိုရင် တပ်မတော်က အရင်တုန်းကလိုမျိုး ဝင်စွက်ဖက်မယ့်ကိစ္စ စိုးရိမ်လားရှင့်။
ကျမတို့က စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကနေ အရပ်သားထိန်းချုပ်မှုရှိတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံကိုကူးပြောင်းဖို့ဖြစ်စဉ်တွေက မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရဆိုရင် လာမယ့် မတ်လအထိ စောင့်ရမှာပါ။ ဒါက ၁၉၉ဝနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေက သိပ်ကောင်း လာတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်သလဲဆိုတဲ့ဆန္ဒအတိုင်း ဖြစ်လာဖို့အတွက် တက်တက်ကြွကြွရှိနေ ကြတယ်။
- တပ်မတော်က လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂၅% ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ကရော ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်သလားရှင့်။
ကျမတို့က ဘယ်သူနဲ့မဆို တွဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အစိုးရတစ်ခုဖွဲ့တော့မယ်ဆိုရင်တော့ တပ်မတော်နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလေ။
- ဒါဆို မကြာခင်မှာပဲ သမ္မတနဲ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကိစ္စဆွေးနွေးတော့မှာပေါ့။
သူတို့ပြောတာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးတဲ့အခါ ကျမနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ တော့ ကျမကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်ဘူး။
- ဒါဆို သူတို့က ဘယ်နေ့တွေ့မယ်ဆိုပြီး မပြောသေးဘူးပေါ့။
မပြောသေးဘူး။ ကြည့်ရတာ သူတို့ ၄၅ရက်ကြာအောင် စောင့်မယ့်သဘောရှိတယ်။ အတိအကျတော့လည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့။
- ဒီကိစ္စ ရှင်စိတ်ပူသလား။
ကျမတို့ စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်။ အတိတ်တုန်းက စိတ်မပူရမယ့်ကိစ္စတွေကိုစိတ်ပူခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ကျမတို့မှာ အများကြီးရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့နောက်မှာ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရှိနေတယ်ဆိုတာကျမတို့သိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လေးစားဖို့အတွက် ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်သူတိုင်းက တရားဝင်ကြေညာရမှာပါ။
- အနှစ် ၂ဝလောက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံပြီး ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းကို မစဉ်းနိုင်ဘူး။
အနှစ် ၂ဝလောက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံခဲ့ရတာဟာ ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့တော့ ကျမမထင်ဘူး။ ကျမအိမ်ကို ကျမသဘောကျတယ်။ စာတွေအများကြီးဖတ်နိုင်တယ်။ အိပ်ရေးလည်း ကောင်းကောင်းဝတယ်။ အခုတော့ အဲဒါတွေ မရတော့ဘူး။
- ဒီမိုကရေစီဟာ တစ်နေ့တော့ရောက်လာမယ်လို့ ရှင်ယုံကြည်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။
အိုး ..ဟုတ်တာပေါ့။ ပြည်သူတွေကို ယုံကြည်ရင် ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်ရမယ်။
- မကြာသေးခင်တုန်းက ရှင်ပြောသွားတာက အစိုးရသစ်ထဲမှာ ရှင်က သမ္မတအထက်မှာရှိမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်နေတဲ့ ရှင့်ရဲ့ကလေးတွေကြောင့် သမ္မတဖြစ်ခွင့်တားဆီးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ချင်လို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လား။
သမ္မတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိစ္စက သိပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ကျမကမထင်ပါဘူး။ ကျမတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာက နိုင်ငံအတွက် အလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ။ ကျမကို သမ္မတပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ပဲခေါ်ခေါ် အဲဒါက တကယ်တော့ သိပ်တော့မသက် ဆိုင်လှဘူး။
- သိပ်ပြီးသက်ဆိုင်တာပေါ့။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ထပ်သီးအစည်းအဝေးလို နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေ စုဝေးတဲ့ အစည်းအဝေး တွေမှာ သူတို့တွေက ရှင့်ကိုသွားစေချင်မှာပဲလေ။ အခြားတစ်ယောက်ကို ဘယ်သွားစေချင်ပါ့မလဲ။
ကျမသွားမှာပါ။ သမ္မတနဲ့အတူ ကျမသွားမှာပါ။ သူက ကျမနံဘေးမှာ ထိုင်ရမှာပေါ့။
- နိုင်ငံခြားမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းတဲ့ကလေးတွေကိစ္စပါဝင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပုဒ်မဟာ သမ္မတမဖြစ်အောင် ရှင့်ကိုတားဆီးထားတာလို့ ယုံကြည်လား။
- အဲဒီဟာကို ပြောင်းလဲဖို့ တပ်မတော်ကို ရှင်နားချနိုင်မလား။
အဲဒီဟာကိုတော့ ချက်ချင်းကြီး ပြောင်းလဲနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျမတို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်မှုဟာ အချိန်ယူရမှာပါ။
- အရင်တုန်းက ရှင်ပြောခဲ့တာက ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆို ...။
ဖွဲ့စည်းပုံဟာ တစ်ချိန်မှာ ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာက ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိစ္စ လာမယ့် ၂လအတွင်းဖြစ်မယ်လို့ ကျမမပြောခဲ့ ပါဘူး။ သင့်တော်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်အတွင်းမှာတော့ ပြောင်းလဲရမှာပါ။
- ဒီလိုဆို သမ္မတကို ရှင်ကခန့်တော့မှာပေါ့။
- ဘယ်သူ့ကို ခန့်မှာလဲ။
- လွှတ်တော်ဥက္ကဌဆိုတဲ့ ရာထူးကိုရော လက်ခံနိုင်သလား။
ကျမက အစိုးရကို စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီနေရာက ကျမသွားရမယ့်နေရာပါ။
- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ မြန်မာပြည်ကြား ဆက်ဆံရေးကရော ဘယ်လိုလဲ။
- ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသွားတဲ့ကိစ္စ အမေရိကန်အစိုးရကို အမှတ်ပေးချင်တာရှိလား။
ဟင့်အင်း။ ကျမတို့ရွေးကောက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းက ကျမတို့ပြည်သူတွေကြောင့်ပါ။ အခြားဘယ်သူကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။
- အိုဘားမားအစိုးရက ဒီနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်စားမှုအကြီးအကျယ်ပြခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့ အစိုးရတွေအများကြီးပါ။
- ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေအများကြီး ဖယ်ရှားပေးခဲ့တယ်။ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တွေဖြစ်တဲ့ ဟယ်လာရီကလင်တန်နဲ့ ကယ်ရီတို့လည်း လာခဲ့တယ်။ ဒါတွေက အားထုတ်မှုအကြီးကြီးတွေပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားနိုင်ငံတွေကလည်း ဒီလိုမျိုးအားထုတ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဗြိတိန်၊ နော်ဝေနဲ့ အခြားစကန်ဒီနေးဗီးယန်းနိုင်ငံတွေပေါ့။ နိုင်ငံအများစုက ကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဖြစ်စဉ်ကို ထောက်ခံကြပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုပဲကွက်ပြီး ကျမမပြောချင်ပါဘူး။
- ကျမကအခု အမေရိကန်သတင်းစာတစ်စောင်အတွက် ရေးနေတာပါ။ အမေရိကန်တွေက သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စား ကြပါတယ်။
ကျမတို့မှာ အမေရိကန်မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူတို့ကျမတို့အတွက် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း အကောင်းဆုံးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။
- ကျန်နေသေးတဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဖယ်ရှားသွားရေးကို ဆိုလိုတာလား။
- အမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက အခြားဘာတွေလုပ်စေချင်သလဲ။
အခုတော့ အားလုံးက ငြိမ်းချမ်းပြီးချောမွေ့တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုပဲ အားပေးထောက်ခံကြပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီဆိုတာ အားလုံးနားလည်ကြပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို လေးကိုလေးစားရမယ်။
- အဲဒါပြီးတော့ရော ….
ကျမတို့ အစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင် ကျမတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲ ပြောပါ့မယ်။
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လာစေချင်တယ်လို့ ကျမထင်တယ်။
သေချာတာပေါ့။ ကျမလိုချင်တာက ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သဘောထားနဲ့ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စီးပွားရေးမျိုးပေါ့။ ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်စေချင်တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကျမတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်လည်းရှိရမယ်။ တစ်ဖက်သတ်စီးပွားရေး မဖြစ်စေချင်ဘူး။
- အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှု ကျန်နေသေးတာတွေ ဖယ်ရှားသွားစေချင်သလား။
စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရအာဏာရပြီဆိုရင်တော့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ဘာလို့ဆက်ထားနေရဦးမှာလဲ။
- ရှင်အာဏာရတဲ့အခါ ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေက အခြားဘာတွေရှိလဲ။
ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာထက် ကျမတို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေလို့ပဲ စဉ်းစားပါတယ်။
- မြန်မာပြည်နဲ့တရုတ် ဆက်ဆံရေးကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ကောင်းပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာ ကျမတို့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက အင်မတန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မူဖြစ်ပါတယ်။
-တရုတ်အစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးစရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့။ သူတို့ကောင်းလား၊ ဆိုးလား။ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ထဲ တရုတ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ ရှင့်အမြင်ကရော။
သေချာတာကတော့ တရုတ်အပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမြင်က အခြားသူတွေရဲ့အမြင်နဲ့တော့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။
- ဒါဆို ရှင့်အမြင်ကရော။
ကျမအမြင်မှာက တရုတ်ပြည်ဟာအိမ်နီးချင်းဖြစ်တယ်။ ကျမတို့အိမ်နီးချင်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
- မြန်မာပြည်ကို တကယ်ပဲပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ ထင်လား။ ပြည်သူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝကို မြှင့်တင်လိုတယ်လို့ ရှင်ပြောတယ်လေ။
ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအတွက် လုပ်စရာတွေကအများကြီးပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးက စရပါမယ်။
- အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခြားက မကြာသေးခင်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ရည်ညွှန်းတာလား။
လုံခြုံမှုဆိုတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေဟာ လုံခြုံမှုရှိနေရပါမယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အတွက် ဘယ်ဥပဒေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ကြဘူး။ ကျမတို့ တရားရုံးတွေကို သန့်ရှင်း စေချင်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေရှိပေမယ့် အဲဒီဥပဒေတွေဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်နည်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်နေဖို့ လိုပါတယ်။
- နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက မွတ်ဆလင်တွေဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။
အဲဒါက ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ကျမမငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနိုင်ငံမှာ အခြားပြဿနာတွေမရှိဘူးလို့ သူတို့ထင်နေတာကို အံ့သြတယ်။ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ ပြဿနာတစ်ခုတည်းပဲရှိနေတဲ့ပုံမျိုးကြည့်တာဟာ သိပ်ဆိုးပါတယ်။ ကျမတို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီမှုအကြောင်း စောစောက ပြောခဲ့တယ်နော်။ (၁၇)ဖွဲ့မှာ (၈)ဖွဲ့ပဲ လက်မှတ်ထိုးရသေးတယ်ဆိုတာ။ အဲဒီကိစ္စကလည်း ပြဿနာတစ်ခုပဲလို့ ကျမတို့ ထင်ပါတယ်။
- ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် စာနာသနားမှု ရှိသလား။
ကမ္ဘာပေါ်က ဒုက္ခခံစားနေသူ လူသားအားလုံးတိုင်းအတွက် ကျမစာနာသနားမှုရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။
- တစ်ချို့က လက်ရှိအစိုးရဟာ အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မဘသလိုမျိုးပေါ့။ မဲဆွယ်ကာလမှာ ပြဿနာတွေမီးလောင်လေပင့်ဖြစ်ဖို့နဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ ကိစ္စတွေမှာ။
ဘာသာရေးဝါဒဖြန့်မှုတွေအများကြီးသုံးပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတစ်လျှောက်မှာ ကျမတို့ပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ ကျမပြောပါရစေ။ ဒီအတွက်လည်း တရားဝင်တိုင်တန်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာမှာတော့ ရဲတွေဆီ အမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
- NLD ကို မဲပေးရင် မြန်မာပြည်ဟာ အမျိုးဘာသာကွယ်ပျောက်သွားမယ်၊ မွတ်ဆလင်တွေက မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့ မဘသက လုပ်ကြံစွပ်စွဲခဲ့တယ်။
ဟုတ်တယ်။ ဒါက သိပ်ကိုမှားယွင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လုံးဝမညီပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘာသာရေးကိုအသုံးမပြုရဘူးလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက ဒီဝါဒဖြန့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတစ်ခု မှ မကိုင်တွယ်ခဲ့ဘူး။
- ဒီလိုဝါဒဖြန့်တိုက်ခိုက်ပေမယ့်လည်း အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
နယ်စပ်နဲ့နီးတဲ့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပုံပေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ မှားယွင်းတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုဆိုတာ ပြည်သူတွေ နားလည်အောင် ကျမတို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
- လက်ရှိအစိုးရဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကနေ နောက်ပြန်လန်နေတယ်လို့ ထင်လား။
သူတို့က နောက်ပြန်လန်နေတာ အခုဆို နှစ်အနည်းငယ်တောင် ရှိနေပါပြီ။
Eleven Weekly ဂျာနယ်က အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ပေါ့။ သူက ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကို အင်မတန်အားပေးသူတစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ (၂) ရက်လောက်က လေဆိပ်မှာ ထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံခြားကိုအလည်အပတ်ထွက်တာလေ။ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းတာပေါ့။
- တပ်မတော်ဘက်ကို ပြန်သွားရအောင်။ ရှင်တို့အစိုးရအတွက် သူတို့ရဲ့ Red Lines တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ ရှင်တို့ရဲ့ Red Lines တွေ ကရော။
ဒီကိစ္စ အခုဆွေးနွေးလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျမ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ရပါမယ်။
ကျမတို့ကတော့ အမျိုးသားပြန်လည်ရင့်ကြားစေ့ရေးလို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။
- သူတို့ပြုမူ ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်မတန်ခါးသီးနေတဲ့သူတွေ ရှိနေမှာပဲလေ။
- ဒါပေမယ့် ထောင်ကျတန်းကျဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ပြောဖို့ခက်မှာပဲလေ။
ဘဝဟာ ခက်ခဲပါတယ်။ ကျမတို့တွေအားလုံး ထောင်ကျတန်းကျဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ ထောင်ကျဖူးတဲ့ NLD ကလူတွေကို သူတို့တွေ အမြဲ ပြောခဲ့တာရှိတယ်။ ထောင်ကျသွားချင်သလား၊ ဘယ်နှစ်နှစ်ကြိုက်လဲ (၅)နှစ်လား၊ (၆)နှစ်လား၊ (၁ဝ)နှစ်လား၊ အနှစ် (၂ဝ)လားဆိုတာ။ NLD က ထောင်ကျခံနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီသူတွေက ခါးခါးသီးသီးမရှိပါဘူး။ တစ်ချိန်က ခံစားခဲ့သူတွေဟာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် တည်ဆောက် ဖို့ ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
- အခုကစပြီး လာမယ့် ၅နှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်သလဲ။
အခုရောက်နေတဲ့နေရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမအမြဲစဉ်းစားတာက တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာ မပြီးဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ လက်ရှိရောက် နေတဲ့နေရာထက် ပိုပြီးခရီးရောက်တဲ့နေရာကို ရောက်စေချင်ပါတယ်။
- လျှပ်စစ်မီးကလည်း ဒီမှာ ပြဿနာတစ်ခုပဲနော်။ ခဏခဏ ပျက်လိုက်၊ လာလိုက်။
မီးပျက်သွားတိုင်း ကျမပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါ မြန်မာပြည်ပဲလို့။ ဒါက ပုံမှန်ပဲ။ မီးပျက်သွားတဲ့ကိစ္စဟာ ကျမတို့ဆီက ပြဿနာတွေ အားလုံးထဲက တစ်ခုပါ။
- မြေယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကလည်း ဘယ်လောက်ကြီးမားလဲ။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးက ကြီးမားပါတယ်။ ကျမတို့ပြည်သူ (၇ဝ%) လောက်က ကျေးလက်မှာနေထိုင်ကြရတယ်။
- မြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးနော်၊ ဟုတ်လား။
ဖွဲ့စည်းပုံအရ နိုင်ငံတော်ကပဲမြေကိုပိုင်ပါတယ်။ မြေပိုင်သူတိုင်းဟာ အစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့နေရပါတယ်။ လယ်သမားတွေဟာ မြေယာကို အခြေ ပြုပြီး ငွေချေးလို့မရဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။
- အခွန်စနစ်ကိုဖန်တီးပြီး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ဖို့ လိုသလား။
အခွန်ကောက်တာက ဒီနိုင်ငံမှာ ပြဿနာအကြီးအကျယ်ရှိနေတယ်။ အခွန်ယဉ်ကျေးမှု ကျမတို့ဆီမှာ မရှိခဲ့ဘူး။
- ဒါဆို ဝင်ငွေကို ဘယ်လိုမြှင့်မလဲ။
ပြည်သူတွေ ဘာ့ကြောင့် အခွန်ပေးရတယ်ဆိုတာနားလည်အောင် ကျမတို့အရင်လုပ်ရပါမယ်။ ပြည်သူ့အခွန်ငွေတွေဟာ ပြည်သူတွေအကျိုး အတွက် အသုံးပြုတယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့အိတ်ထဲ အခွန်ငွေတွေရောက်မသွားဘူးဆိုတာ သက်သေပြဖို့လိုတယ်။
- ရှင်ပေးမယ့်အမွေက ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲ။
ကျမ စတောင် မစရသေးဘူး။ ကောင်းမွေဆိုတာမပြောခင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပါဦး။
ဦးကြည်မောင်၊ နူးရင်ဘာ့ခ်နှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး (မျိုးမြင့်ချို) ၂ဝ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်
at 3:13 AM Posted by myo0comments
မနေ့က (ဆရာ)ဇော်ဇော်အောင်၏ “ကျနော်သဘောမတူပါ”ကိုဖတ်နေရင်း ၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးစအချိန်ကို စိတ် ပြန်ရောက်၏။ ထိုကြားဖြတ်ရွေးပွဲပြီးစက မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ မေးပြောပြောသည့်စကားကိုလည်း ပြန်တွေးမိ၏။ ထိုမိတ်ဆွေက ခုမှ ကောက်ကာငင်ကာ “အမေစု” ဖြစ်သူမဟုတ်ပဲ “အန်တီစု”ခေတ်က စကာ နိုင်ငံရေးကို ခရီးသွားဟန်လွှဲစိတ်ဝင်စားသူခဲ့ဖြစ်၏။ ထောင်တန်းအကျခံပြီးလုပ်နေကြသူ တွေကိုကျတော့“နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားလို့၊ နိုင်ငံရေးဝါသနာပါလို့”လုပ်နေသူတွေအဖြစ်မျှသာ သဘောထားသူဖြစ်၏။ သူနှင့်ကျနော် ခု ပြန်ဆုံ တော့ အနှစ်(၂ဝ) ကျော်လာခဲ့ပြီ။ သို့သော် သူ့နိုင်ငံရေးသက်က သူ့ လူ့ အသက်အရွေ့ကို မေ့နေဟန်တူ၏။ ခုတော့ သူလည်း “အမေစု”။ သူ့ဘာသာ “အမေ”ဖြစ်ဖြစ် “အန်တီ”ဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီး။ အရေးကြီးသည်က သူ့ စကားများ။ စကားဆိုသည်က နောက်ကွယ်တွင် တရားရှိ၏။ ယခု ပြောချင်သည်က ထို တရား။
(၉ဝ)ရွေးကောက်ပွဲတွင် အင်န်အယ်လ်ဒီထံ အာဏာမလွှဲခဲ့သည့်အပေါ် သူနှင့်မိမိ အတိုင်းအတာတခုအထိ အမြင်တူခဲ့ဖူး၏။ (၂ဝ၁၁) ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလည်းပြီးရော “အဲ့ဒီတုန်းက ဦးကြည်မောင်က ဦးခင်ညွန့်ကို နူးရင်ဘာ့ခ်ခုံရုံးတင်မယ် သွားပြောတာကိုး၊ ပြီးတော့… အာဏာကလည်း မက်သေး”ဟု ဖြစ်ကာ လေသံပြောင်းသွား၏။ ဒါက တစ်ခု။
“အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြောနေပြီး အရင်အစိုးရလုပ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်ရမယ်ပြောနေတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်။ ကျနော်ကတော့ နားလည်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာက မဟောသဓာနဲ့ကေးဝဋ်ပုဏ္ဏားလို …….”ဟုစကားခံကာ “ချေ ၂ ချေ”တရား ဟော၏။ ဒါက နောက်တစ်ခု။
“ခေတ်က ပြောင်းနေပြီဗျ၊ ချမဟဲ့ဆော်မဟဲ့ လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ တိုင်းပြည်ကို ဆန္ဒပြပွဲနဲ့သေနတ်နဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူးဗျ” ဆိုကာ ပညာခေတ်အကြောင်း ပညာပေး၏။ ဒါကလည်း နောက်ထပ်တစ်ခု။
ထိုမိတ်ဆွေ၏ “အာဏာမက်နှင့်နူးရင်ဘာ့ခ်”ကို ကျနော်က “ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အာဏာပြဿနာ”အဖြစ်မြင်ထား၏။ ဦးကြည်မောင်သည် “အာဏာပြဿနာနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး”ကို တစ်ခုတည်းအဖြစ်တွဲမြင်သူဟု ကျနော်က အမှတ်ပြုယုံကြည်သူဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုကိစ္စ သက်သက်ကွက်၍ ဤနေရာ၌ပြောချင်လာ၏။ ကျန်ကိစ္စများကိုတော့ နောင်တွင်ပြောမည်တွေး၏။
အရင်ဆုံး (၉ဝ)ရွေးကောက်ပွဲကို ပြောချင်၏။ နောက်ခံများသိကြပြီးသားမို့ ပြောရေးမချဲ့လိုတော့။ (၉ဝ) ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲကို အင်န်အယ်လ်ဒီ ဝင်ခဲ့သည်က အာဏာ(၃)ရပ်လုံး လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရနိုင်ခြေရှိမှုအောက်က ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ တနည်းပြောရလျှင် အစိုးရဖွဲ့၊ လွှတ်တော် ခေါ်၊ ဥပဒေပြုဖို့(ဖွဲ့စည်းပုံဆွဲ)ဖြစ်၏။ အလွန်ရှင်း၏။ ထွေပြားစရာ ဘာမှမရှိ။ သို့သော် ဝေဝါးခဲ့ကြသည်ထင်၏။ ထိုအချိန်က နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ပြဿနာ၏အရင်းတရားကို “ဘာမှန်း”သေချာသိမြင်သူများလောက်သာ ဗူးလုံးနားထွင်းခဲ့ကြ၏။ အချို့က “အာဏာမမက်”တို့၊ “အာဏာလိုချင် လို့မဟုတ်”တို့၊ “အမျိုးသားနိုင်ငံရေး”တို့ဟုဆိုကာ အမောင်တောင်မြောက်မကွဲခဲ့ကြ။
တကယ်တမ်းအရင်းခံက “အာဏာပြဿနာ”။ ထို့ကြောင့် “အာဏာလွှဲပေး”ဟု တင်းတင်းရင်းရင်း မပြောဝံ့သူတို့လည်းရှိခဲ့ကြ၏။ ပြောဝံ့သူက ပြော၏။ သို့တိုင် မိမိဘက်က တချက်ကလေးတွေဝေလိုက်သည်နှင့် သူ့ဘက်ကလက်ဦးမှုယူကာ တစ်သက်စာနာလံမထူအောင် ချေမှုန်း ပစ်လိုက်၏။ ထိုတွင် အာဏာရယူရေးမျှော်မှန်းချက်နှင့် ဝေးသွားတော့၏။ ဗမာ့လက်တွေ့နိုင်ငံရေး၏လက်သည်မှာ အာဏာပြဿနာမှန်း ဦးကြည်မောင်လိုခေါင်းဆောင်တချို့က အလွန်အလေးအနက်ထားခဲ့၊ သိခဲ့ကြ၏။ ဦးကြည်မောင်ထိုသို့သိမှန်း စစ်ဗိုလ်တွေကလည်းသိထား၏။ ဤတွင် ယိုးမယ်ဖွဲ့ဖို့ရမယ်ရှာတော့ ဦးကြည်မောင်ကို တွေ့၏။ အမှန်က ဤကိစ္စသည် ဦးကြည်မောင်နှင့်မဆိုင်၊ အာဏာနှင့်သာဆိုင်၏။ ဦးကြည်မောင်ကိစ္စမဟုတ်။ “အာဏာကိစ္စ”။ ဤမျှ သိသိနှင့်မျက်စေ့စုံမှိတ်ကာ ထို(၉ဝ)ရလဒ်ကို နိုင်ငံ့သမိုင်းထဲမှာပဲ ထားထား၊ နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းထဲမှာထားထား၊ ထားလို့ရ၏။ ထားသူတို့ ထားခဲ့လိုက်ကြပြီဖြစ်၏။ ထားခဲ့ပြီမို့ ပြောနေစရာမလို ဆိုလျှင်တော့မဟုတ်သေး။ ခုတောင် ပြောရပြီမဟုတ်လား။
(၂ဝ၁၂)ကြားဖြတ်ဝင်တာကျတော့ အာဏာယူဖို့မဟုတ်တော့။ ယူချင်လို့မရတော့။ အာဏာရနိုင်ခြေရှိမှုအောက်ကဝင်ခဲ့တာ မဟုတ်တော့။ ရှိနေသည့်အစိုးရကိုအသိအမှတ်ပြု၊ ဆွဲပြီးသားဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၊ ဖွဲ့ပြီးသားလွှတ်တော်ထဲ အိမ်ဖြည့်သဘောဝင်ထိုင်ပေးဖို့။ မိမိဘက်က ဤမျှသာ။ (“ဒီ့ထက်မက”ဆိုသူများလည်း ရှိနိုင်ပါ၏) သူ့ဘက်ကကြတော့ ခိုင်၏။ ချည်ပြီးသားတုတ်ပြီးသား။ “လေးစားလိုက်နာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖြစ်”အရေးမကြီး။ ဒါတောင် နောက်ဆုံး “ကာကွယ်စောင့်ရှောက်”နှင့် အနိုင်ပိုင်း ခံလိုက်ရသည်မဟုတ်လား။ ဒီ့မတိုင်ခင်ကလည်း တင်ရေး/မတင်ရေးအစတွေ ပလူပျံအောင်ထွက်လာ၏။ နောက်ဆုံး တင်ရေးက ပေါက်ကောင်ပွင့်ခဲ့၏။ တခါ မှတ်ပုံတင် ပြီး ကြားဖြတ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ မဝင်ခင်မှာ ဝင်-ပြင် နှင့် ပြင်-ဝင် အကြိတ်အနယ်။ နောက်ဆုံး ဝင်-ပြင်လိုင်းကျ၏။ အမှန်က ဝင်-ပြင်နှင့် ပြင်-ဝင်တွေတို့သည် တင်/မတင်ကာလကပင် အစပျိုးပြီးသား။ ဒီလိုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးကြွေးကြော်သံနှင့် လွှတ်တော်ထဲဝင်သွား၏။ ပြည်တွင်းစစ်မီးလည်းတောက်ဆဲ၊ ၂ဝဝ၈ ဥပဒေလည်းစိုးမိုးဆဲ၊ ဖွဲ့စည်းပုံလည်း ပုံမပျက်ရှိနေဆဲ။
ဆိုတော့ ကြားဖြတ်ဝင်ခြင်းသည် အာဏာကိစ္စလို့ တိတိပပပြောဖို့ခက်၏။ သူ့စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ပြီး၊ အထိုင်ချထားသည့်အာဏာကို ဖြိုချဖို့အသာထား ထိပါးလို့ပင်မရသေး။ သည်အနေအထားမှာ “အာဏာစကား”ပြောလို့မဖြစ်။ “အာဏာလွှဲပေး”ပြောလို့မရ။ ဒီတော့ “စစ်ဗိုလ် တွေနဲ့တည့်အောင်ပေါင်း”ပဲ ပြောရတော့မည်။ ခု “သမ္မတဖြစ်ချင်သည်၊ အာဏာလိုအပ်သည်”ဟုပြောင်းလာ၏။ ကောင်း၏။ ကြိုဆို၏။ ထို စကားက အနှစ်နှဆယ်ကျော်အကြာကပင် ကြားချင်သည့်စကား။ စိတ္တဇနာမ်ဖြစ်သော၊ စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်စကားလုံးဖြစ်သည့် “အမျိုးသား နိုင်ငံရေး” ဆိုသည်ကိုလွှတ်ချပြီး “အစိုးရဖြစ်ချင်တယ်၊ အာဏာလိုအပ်တယ်” ကို အတိအလင်းထုတ်ပြောလိုက်သဖြင့် ရှင်းသွားပြီဟု ယူဆ၏။ အစိုးရဖြစ်ချင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအာဏာကိစ္စသည်“မက်”စရာမဟုတ်။ “လိုအပ်ချက်” သာဖြစ်၏။ သို့သော် ထို လိုအပ်ချက်နှင့် ဖြစ်ချင်သည့်သမ္မတအတွက် ကျော်နင်းရမည့်ကန်သင်းတို့ကား ထူထူပြောပြော။
ဥပဒေပြုရေးဘက်ကကြည့်လျှင်လည်း (၉ဝ)တုန်းကလို “ဥပဒေပြုရေး”ပြောမရ။ “ဥပဒေစိုးမိုးရေး” ပြောင်းရ၏။ မပြောင်းလို့မရ။ ကိုယ့်ရွေးလမ်းနှင့်ကိုယ် ဖြစ်နေ၏။ သို့သော် ဘယ် ဥပဒေစိုးမိုးရေးလဲ။ ဘယ်ပုံစိုးမိုးအောင် လုပ်မလဲဆိုသည်ကတော့ သဲသဲကွဲကွဲမရှိလှ။ “တရား”ဥပဒေစိုးမိုးဖို့ဆိုလျှင် “စိုးမိုးမည့်” ဥပဒေသည် “တရားမှ”ဖြစ်မည်။ ဥပဒေစိုးမိုးသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်း ကောင်းမှန်း လူတိုင်းသိသလို၊ ကောင်းသည့်(တရားသည့်) ဥပဒေစိုးမိုးမှ ဖြစ်ကြောင်းလည်း လူတိုင်းသိကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် တိကျရှင်းလင်းသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်လို၏။ သို့မဟုတ်လျှင် “ဘယ်သူပြုသည့် ဘာဥပဒေ၊ ဘယ်သူတွေအပေါ်စိုးမိုးမှာလဲ”ဆိုသည့် အမေးတို့နှင့်သာ လုံးလည်နေလိမ့်မည်ထင်၏။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ဆိုင်သည့် (ဦး)အောင်ထူး-ရှေ့နေရေးသည့်စာကို ဤနေရာတွင် ကောက်နှုတ်ကိုးကားချင်၏။ သူက …. ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏အခြေခံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အဓိကထားသည်။ တရားမျှတမှု၏အခြေခံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူအား အဓိက ထားသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တကယ်တန်းလိုက်နာကျင့်သုံးလျှင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အပြစ်ပေးကို ပေးရပါမည်။ ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အပြစ်ပေးရေးမူကိုကျင့်သုံးခြင်းမှာ ထိုသူအား အာဃာတထားလို၍မဟုတ်။ အပြစ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ကိုယ်တိုင် နောင်တရသွား စေချင်သည့်အပြင် အခြားသူများကလည်းသင်ခန်းစာယူ၍ နောင်ကိုအလားတူပြစ်မှုများထပ်မံမကျူးလွန်စေရန် ဟန့်တားလို၍ဖြစ်သည်။
ပြန်ကောက်ရလျှင် ဖြစ်ခဲ့သမျှကိစ္စတို့သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အာဏာပြဿနာ။ ဦးကြည်မောင်က ထိုနှစ်ခုကို တစ်ခုတည်းဖြစ်မှန်း သေချာထားသူ။ (၉ဝ)ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အာဏာ မအပ်ရတာက“နူးရင်ဘာ့ခ်”ကြောင့်ဟု ဦးကြည်မောင်အားလက်ညှိုးထိုးယိုးစွပ်သည့် “အာဏာမက်”သူတို့၏နှုတ်ထွက်စကားကို တရားလုပ်ပြောလာသောကျနော့်မိတ်ဆွေအား သေချာဃဏ ဖြစ်စေချင်လှ၏။
မျိုးမြင့်ချို (ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် ၂ဝ၁၃)
လွှတ်တော်ထဲ (ဝင်)တာကအရင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ(ပြင်)တာကနောက်(ဝင်-ပြင်)။
စာကိုး- (ဦး)အောင်ထူး- https://www.facebook.com/ahtoo1